Party ဆိုင်ရာ အီဒီယံ အသုံးအနှုန်းများ
17 အောက်တိုဘာ၊ 2015
ဒီတပတ် English Learning: America Idioms and Expressions ကဏ္ဍမှာ ပါတီ (Party) ပွဲတွေ ကျင်းပရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ stag party, tailgate party နဲ့ baby shower တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
(၁) Stag party
Stag (သမင်ဖို၊ ဆတ်)၊ Party က ကျမတို့ မြန်မာမှာလည်း အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရအတိုင်း ပါတီဆိုပြီး မြန်မာမှု ပြုသုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ သမင်ဖိုပါတီ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက် အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အမျိုးသားတွေ ချည်းပဲ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပါတီပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါတီပွဲကို တနေရာ၊ တအိမ်အိမ်မှာ အမျိုးသားတွေချည်းပဲစုပြီး ဖဲဝိုင်းလုပ်တာ၊ တီဗွီမှာ လက်ဝှေ့ပွဲ၊ ဘောလုံးပွဲတွေကို ကြည့်ရင်း သောက်ကြ၊ စားကြ၊ ပျော်ကြ ပါးကြတဲ့ ပွဲကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စောစောက ရှင်းပြခဲ့တဲ့ပါတီမျိုး ဖြစ်နိုင်သလို သတိုးသားတဦးအနေနဲ့ မင်္ဂလာမဆောင်မှီ တအိမ်အိမ်မှာစုပြီး အမျိုးသားတွေချည်း လုပ်တဲ့ပါတီကိုလည်း stag party လို့ ရည်ညွှန်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့်တော့ ဒီလိုမျိုးပါတီကို Bachelor party လူပျိုပါတီရယ်လို့ ခေါ်လေ့ရှိပြီး၊ အိမ်ထောင်မကျမီ သတိုးသားအတွက် ကျင်းပပေးတဲ့ ပါတီမျိုးနဲ့လည်း တူပါတယ်။ Stag party အသုံးအနှုန်း ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
John gave his brotherastag party last night because he is getting married today. Boy, it was wild!
John က ဒီနေ့ မင်္ဂလာဆောင်မယ့် သူ့ညီအတွက် မနေ့ညက သူတို့ အမျိုးသားတွေကိုပဲ ဖိတ်တဲ့ပါတီပွဲတပွဲ ကျင်းပပေးခဲ့တယ်။ ကဲလိုက်ကြတာ။
(၂) Tailgate party
Tailgate ဆိုတာက station-wagon ဆိုတဲ့ နောက်ဖွင့်ကားရဲ့  နောက်အဖုံးကို ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့မြန်မာမှာလည်း အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရကို မြန်မာမှုပြုပြီး ဒီစကားလုံးအတိုင်း ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ နောက်ဖွင့်ကားပါတီ ဖြစ်ပါတယ်။ Station-wagon ကတော့ ခရီးသွားတဲ့အခါမှာ နေရာကျယ်တော့ အလွန်အသုံးဝင် အဆင်ပြေတဲ့ ကားမျိုးကို ခေါ်ပါတယ်။ ခရီးတထောက်နားတဲ့အခါ၊ ပျော်ပွဲစားထွက်တဲ့အခါ ကားနောက် ဖုံးကိုဖွင့်ပြီး
ပါလာတဲ့ စားသောက်စရာများကို နောက်ခန်းထဲမှာ ခင်းကျင်းစားသောက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားကစားကို နှစ်သက်အားပေးကြတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ tailgate party ကို အများအားဖြင့် ပြိုင်ပွဲမစမီ ကစားကွင်းအပြင်ဘက်မှာ မိတ်ဆွေတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေစုပြီး တပျော်တပါး ချက်ပြုတ်စားသောက်ကြတာကို ခေါ်ဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် hot dog အစားသွတ် ဝက်အူချောင်းကို အသားညပ် ပေါင်မုန့်နဲ့စားဖို့ ပါလာတဲ့ မီးဖိုမှာ မီးကင်ပြီး တခြားအစားအစာတွေနဲ့အတူ တဦးတယောက်ရဲ့  ကားနောက်ခန်းမှာ ခင်းပြီး စားသောက်ကြတာကို Tailgate ပါတီလို့ ရည်ညွှန်းပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံးသွားကြည့်တဲ့ ပရိသတ်တချို့  Tailgate ပါတီလုပ်တာကို ပြောပြထားတဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
We hadagreat time at the tailgate party held outside the stadium before the football game.
ဘောလုံးပွဲ မစခင် ကစားကွင်းအပြင်ဘက်မှာ ကျနော်တို့ နောက်ဖွင့်ကား ပါတီ လုပ်ခဲ့တယ်။ အပျော်ကြီး ပျော်ပေါ့ဗျာ။
(၃) Baby shower
Baby (ကလေးငယ်)၊ Shower ကတော့ အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ နာမ် (noun) အဖြစ်သုံးထားပြီး လက်ဆောင်တွေ စုပေးတာလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် baby shower ဆိုတဲ့ စကားစု တစုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ကလေးအတွက် လက်ဆောင်တွေ စုပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံ အဓိပ္ပါယ် ကလည်း သိပ်မကွာလှပါဘူး။ ကလေးမျက်နှာ မမြင်ခင် မိခင်လောင်းကို ဝိုင်းပြီးတော့ ကလေးပစ္စည်းတွေ လက်ဆောင်ပေးကမ်းကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ မြန်မာဓလေ့မှာတော့ မျက်နှာမြင်ပြီး လသားအရွယ်မှ ကလေးကင်ပွန်းတပ်တာမျိုး ဆင်တူပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံ ထုံးစံအရတော့ အမျိုးသမီးတဦး ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ အဲဒီ အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက ဝိုင်းပြီးကလေးပစ္စည်းတွေ လက်ဆောင်ပေးကြပါတယ်။ တနည်းဆို မီးနေဝင်ချိန်၊ မီးဖွားပြီးချိန်မှာ မွေးကင်းစ ကလေးငယ်အတွက် အိပ်ရာခင်း၊ ကလေးအဝတ်အစား၊ အရုပ်ကစားစရာ၊ အသုံးအဆောင် စသည်တို့အပြင် မိခင်အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ငွေစုထည့်ပြီး ဝယ်ပေးကြတဲ့ တပျော်တပါး စားသောက်ကြတဲ့ပါတီမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေချည်း လုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးပါတီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးအနှုန်းအတွက် ပေးထားတဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
I notice the girls in our office are planning to give Susanababy shower. They are all excited about the baby.
ကျနော်တို့ ရုံးက ကောင်မလေးတွေက Susan အတွက် မိခင်လောင်းပါတီ ပေးဖို့ ပြင်ဆင်နေတာကို သတိထားမိတယ်။ မွေးလာမယ့် ကလေးအတွက် သူတို့ သိပ်ပျော်နေပုံရတယ်။
ဒီသီတင်းပတ် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ Party နှင့် ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းတွေက stag party, tailgate party နဲ့ baby shower တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။